Mpanamboatra varavarankely mifanila tsara indrindra. Media
Zavakanto vaovao hihaonana amin'ireo hatsaran-tarehinao manokana! Personalization sy customization ho hafa! Raha ampitahaina amin'ny varavarana sy varavarankely hafa miasa, ny rafitry ny varavarankely mifanitsy dia mifantoka kokoa amin'ny traikefa niainana. Ny loko minimalista sy ny famolavolana haingo antonony dia hatrany amin'ny lalan'ny mpamolavola MEDO, mba hahatonga ity varavarana sy varavarankely voatanisa ity ho miavaka kokoa.
Rafitra fikandrana mifanila
Tsy mitovy amin'ny varavarankely famoahana matetika, ny rindrin'ny rindrina manasaraka dia manamora ny fomba fijery, Ary ny tontonana iray manontolo dia azo atosika ho an'ny fiakaran'ny haavony.
Ny maody fanokafana 360 ° dia manome fiasan-doha amin'ny rivotra sy rivotra ary rivotra moka.
Manisy fiovana isika!
Raha ampitahaina amin'ny rafitra am-baravarankely hafa manenjika ny fanaingoana, MD-95PT parallèle ny rafitry ny fikandrana dia mandinika bebe kokoa ny fiainana niainana.
Ny mpamorona MEDO dia nahavita ny famolavolana tamin'ny loko tsotsotra sy tsipika fandravahana.
MDPXX95A Window Window
Zavakanto vaovao hihaonana amin'ireo hatsaran-tarehinao manokana! Personalization ary fanaingoana ho hafa. Raha ampitahaina amin'ny varavarana miasa hafa ary varavarankely, ny rafitra varavarankely mifanitsy dia mifantoka bebe kokoa amin'ny velona traikefa. Ny loko minimalista sy ny famolavolana haingo antonony dia hatrany amin'ny làlan'ny mpamolavola MEDO, hanaovana an'ity varavarana mahaolona ity ary windows miavaka kokoa.
Push fisaka, fanokafana lehibe
Mombamomba ny fiatoana mafana mba hahazoana insulate termal tena tsara. mirazotra fisokafana ho an'ny fehikibo miafina sy varavarankely fanokafana lehibe.
Mitondra enta-mavesatra be
Enta-mavesatra mavesatra ho an'ny fikandrana fikomiana ho an'ny varavarankely fanokafana lehibe.
Flame Frame And Sash, famehezana avo
Kitapo sy fehiloha
Fikatsoana rivotra tena tsara
Fikatona rano hafakely
Atsofohy amin'ny endriny madio sy lamaody ny volavola sy fehiloha. EPDM gazy mitambatra ho an'ny fanamafisana ny rivotra sy ny fahateren'ny rano.
Smart fanaraha-maso lavitra
Teboka sy mpiambina tsy mahazaka fray mba hisian'ny fiarovana bebe kokoa sy rivotra madio kokoa fanoherana. Smart fanaraha-maso lavitra ho an'ny asa mety.
MOTORIZINA | WALL-SIZE
Tsy toy ny varavarankely sy ny varavarankely momba ny kofehy, ny fantsom-baravarankely mifanila dia voaroaka tanteraka. Ny endrik'ilay trano manontolo dia toa miray sy milamina na dia misokatra aza ny varavarankely rehetra ary azo sorohina ny fisaintsainana tsy mifanaraka.
Jiro tsara kokoa
Tsy maninona na avy aiza na avy aiza no misy ny tara-masoandro, dia afaka miditra ao amin'ilay efitrano izy nefa tsy voasakanan'ny vera.
Ny fanokafana voafetra dia manome fiarovana ho an'ny mpampiasa rehetra indrindra ho an'ireo toerana ho an'ny daholobe toy ny hotely, hopitaly, oniversite ary tranobe ara-barotra sns. Fandehanana mora sy mahomby amin'ny varavarankely hametrahana azy amin'ny toerana malalaka misokatra manome antoka fa afaka miasa ny rehetra nefa manome fiarovana azo antoka.
Rafitra fananganana rivotra sy fanalefahana tena tsara
Rivotra mahomby manodidina ny lafiny efatra amin'ny varavarankely. Afaka mivezivezy mora foana ny rivotra. Ary afaka mivoaka haingana ny setroka. Noho ny SARS sy COVID dia sarobidy amin'ny besinimaro ny rivotra.
Manaraka: ambony seza